“Ndiri Kuita Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva” (Zvakazarurwa 21)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Uruund Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Unoda kuti iwe nemhuri yako muve noutano hwakanaka uye murarame kwenguva refu here? Unoda kurarama munyika inenge isisina kurwadziwa, kutambura uye rufu here? Nyika yakadaro haisi yokungofungidzira. Asi ichatovapo munguva pfupi iri pedyo nokuti ndicho chinangwa chaJehovha Mwari. Ona kuti kuzadzika kwechinangwa chaMwari kunotsanangurwa sei pana Zvakazarurwa 21:3-5.—Verenga.
“[Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo.” (Zvakazarurwa 21:4) Achapukuta misodzi yorudzii? Haisi misodzi yekufara kana kuti iya inodzivirira maziso edu. Mwari anovimbisa kuti achapukuta misodzi inokonzerwa nokutambura uye kusuruvara. Haasi kuzongopukuta misodzi iyi chete asi achatobvisa zvinoita kuti vanhu vacheme, zvinosanganisira kutambura uye kusuruvara.
“Rufu haruchazovipo.” (Zvakazarurwa 21:4) Hapana chimwe chinonyanya kuita kuti vanhu vacheme kupfuura rufu. Jehovha achaita kuti vanhu vanoteerera varege kufa. Achazviita sei? Achabvisa zvachose chivi chinokonzera rufu chakabva kuna Adhamu. (VaRoma 5:12) Jehovha achabvisa chivi pavanhu vanoteerera achishandisa chibayiro chorudzikinuro chaJesu. * Zvadaro muvengi wekupedzisira anova rufu “achaparadzwa.” (1 VaKorinde 15:26) Vanhu vakatendeka vachararama nokusingaperi vaine utano hwakanaka sezvaidiwa naMwari pakutanga.
‘Kurwadziwa hakungazovipozve.’ (Zvakazarurwa 21:4) Kurwadziwa kwerudzii kuchabviswa? Ndokuya kunokonzerwa nokushushikana uye kurwara nemhaka yechivi chakabva kuna Adhamu, kuri kuita kuti mamiriyoni evanhu atambure.
Nokukurumidza vanhu vachange vava kurarama vasingachemi, vasingafi uye vasingarwadziwi. Asi ungabvunza kuti, ‘Izvi zvichaitikira kupi?’ ‘Kuti vimbiso yaMwari iyi ingangova ichireva kuti vanhu vachararama kudenga here?’ Kwete. Ona kuti nei zvisina kudaro. Chokutanga, vimbiso iyi inotanga nemashoko okuti “tende raMwari riri pakati pevanhu,” uye sezvatinoziva vanhu vanogara panyika. (Zvakazarurwa 21:3) Chechipiri, inotaura nezvenyika inenge ‘isisina rufu,’ zvichireva kuti inyika yaimbova nerufu. Kudenga hakuna kumbobvira kwava nerufu, asi rwave rwuripo panyika pano kwenguva refu. Zviri pachena kuti vimbiso yaMwari yokuti vanhu vave neupenyu hwakanaka ichazadzika panyika pano.
Mwari achaomesa misodzi iri kukonzerwa nekutambura uye kusuruvara
Jehovha anoda kuti tive nechivimbo chokuti achaita kuti nyika ive nevanhu vakarurama. Achangopedza kutsanangura zvikomborero zvaachaunzira vanhu, anosimbisira vimbiso yake achiti: “Tarirai! Ndiri kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.” Uyewo anowedzera kuti: “Mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi.” (Zvakazarurwa 21:5) Wadii kudzidza zvakawanda nezvekuti iwe nevaya vaunoda mungaita sei kuti muve pakati pevanamati vanofara vaMwari vachaona vimbiso iyi yakanaka ichizadzika?
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna December
1 Petro 1-5; 2 Petro 1-3; 1 Johane 1-5; 2 Johane 1-13; 3 Johane 1-14; Judha 1-25–Zvakazarurwa 1-22
^ ndima 5 Kuti udzidze zvakawanda nezvechibayiro chorudzikinuro chaKristu, ona chitsauko 5 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI December 2013 | Mwari Anokosha Here Muupenyu Hwedu?